ပုံနှိပ်ဆားကစ်, printed wiring, printed board, printed circuit board (PCB), printed wiring board(PWB), rigid printed board, Rigid2layer printed board.2layer, TG180, ENIG, 2အောင်သေးငယ်တဲ့-to-အပုံနှိပ်ဝါယာကြိုး��ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့�ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်��PCB���ပုံနှိပ်ဝါယာကြိုးဘုတ်အဖွဲ့�PWB prတင်းကျပ်ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့edတောင့်တင်းသောd, အလွှာပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့rd (အလွှာ pTG180d ENIGng board(PWB), rigid printed board, Rigid2layer printed board.2layer, TG180, ENIG, 2အောင်သေးငယ်တဲ့-to-အလတ်စား volu ပေးသွင်း,စက်ရုံ -WMD
2 အလွှာ FR4 TG180 အစိမ်းရောင်
2 အလွှာ TG180 ဘုတ်အဖွဲ့
အဝတ်အချည်းစည်းဘုတ်အဖွဲ့, ရှင်းလင်းသောဘုတ်အဖွဲ့, တစ်ခုတည်းအရွယ်အစား 177,8 * 76.2MM, တစ်ခုတည်းအဖြစ်သင်္ဘော, 1.6မီလီမီတာ -2အောင်စ -2အလွှာ - FR4 180Tg, အစိမ်းရောင်ဂဟေဆက် gloss x ကိုတှနျးလှနျ 2, အဖြူရောင် Silkscreen က x 2, ENIG finish ကို. ul မှတ်သားခြင်းနှင့်အတည်ပြု, အလွှာရေတွက်ဖြစ်ပါသည် 2, IPC CLASS 2, အားလုံး soldermask ဆည်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ရပါမည်.
နည်းပညာဆိုင်ရာ features တွေမြင့်မားသော TG ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ENIG ကုသမှု. လျင်မြန်စွာအလှည့်ရှေ့ပြေးပုံစံ, တစ်ချိန်ကစမ်းသပ်ပြီး, မြင့်မားသော Volume ကိုထုတ်လုပ်မှုလက်ခံသည်. ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသည်. DHL နေဖြင့်ဖြန့်ဝေဖော်ပြ, ယူပီအက်စ်, Fedex, TNT သို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမဆိုသတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်း, ပင်ပင်လယ်နားမှာက. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များကအသိအမှတ်ပြုထားပါသည်, မည်သည့်လိုအပ်ချက်များကိုပါလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ.
လူမီနီယမ် PCB တစ်ခုတည်းအလွှာ PCB လူမီနီယမ်အခြေစိုက် Counterbores